Kedu ụzọ ị ga-esi adọta ezigbo backlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị?
Achọrọ m ịmalite isiokwu a na nkọwa dị mkpirikpi nke backlink maka ndị ọhụrụ na isiokwu a. A backlink bụ hyperlink na-abata site n'otu ibe na ibe. Dị ka a na-achị, a na-etinye njikọ na ederede ma yie ihe ederede arịlịka. Site na ịpị na ederede a, ị ga-aga nkọwa nkọwa ma ọ bụ weebụsaịtị nke a na-ekwu na ọdịnaya a - precio de corbatas finas. Njikọ ndị a na-enyekarị ndị ọrụ ihe ọmụma bara uru ma nyere ndị nwe ụlọ weebụ aka ịkwalite ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ ha ma ọ bụrụ na ihe niile mere nke ọma.
Ejiri isiokwu a iji kụziere gị otu esi enweta ezigbo backlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ ga-amasị m ịnye gị aka na ngwaọrụ ndị ịchọrọ iji nweta backlinks kachasị mma ma nwekwuo ike iru gị.
Ọ bụghị niile backlinks na-kere kere. Ọ bụ ya mere ị ga-eji kpachara anya mgbe ị na-arụ njikọ gị na saịtị. Dị ka a na-achị, a na-eji backlinks maka nzube abụọ. Nke mbụ bụ iji nyere aka na ebe nrụọrụ weebụ nweta ogo njikọ ihe ọṅụṅụ ma bulie ikike ikike na weebụ. Ihe nke abuo bu iji merie onwe gi ma obu n'amaghi ama maka gi.
Kedu otu esi amata ọdịiche akwa backlink?
N'ikwu okwu n'ozuzu, nsụgharị backlinks dị elu bụ ndị na-esi na ebe nrụọrụ weebụ kacha mma. Ha dị mkpa ma rụọ ọrụ nke ọma. Ka ndị mmadụ na-ejikọta na saịtị kachasị mma, ọ ka mma maka ogo ụlọ ọrụ ọchụchọ ahụ. Google ga-ele njikọ ndị dị otú ahụ ma kwụọ ụgwọ njikọ ahụ dị na ọkwa dị elu na aha ọma. Ọ bụ kpọmkwem ihe ịkwesịrị ịchọ na ụlọ njikọ.
Otú ọ dị, dị ka m kwuru tupu ọ bụghị niile backlinks e kere ka hà ma na-esote na ha niile bụ ndị yiri nke ahụ bara uru. Ọ bụ ya mere webmasters ji mara kpọmkwem ihe dị elu backlink.
Ka anyị depụta ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa nke backlink: dịka
dị mkpa na niche nke ebe nrụọrụ weebụ akwadoro;
na-abịa site na ebe nrụọrụ weebụ a tụkwasịrị obi;
na-eziga na okporo ụzọ na-ezo aka;
n'ụzọ ziri ezi etinye na ọdịnaya nke saịtị ahụ;
a gaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ kwụghachi ya;
ọ dị ka mgbasa ozi;
ọ na-atụnye gị PageRank.
Njikọ dị elu dị otú a siri ike inweta. Ọ bụ ya mere ha ji enwe mmasị dị ukwuu site na engines na ndị ọrụ ọchụchọ. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịnweta njikọ dị otú ahụ site n'ọtụtụ dịgasị iche iche, ọ bụghị 100 backlinks site na otu saịtị PR dị elu. Buru n'uche na Google nwere ike ịhụ naanị mgbe ị na-agbalị ịghọ aghụghọ usoro.
Olee ụzọ kachasị mfe isi nweta backlinks dị mma na saịtị gị?
Ihe mbụ ị ga-achọ ịghọta bụ na a ghaghị wuru azụ azụ, ọ bụghị zụta ya. Ntughari ụlọ njikọ zuru oke ga-adabere n'ịrụsi ọrụ ike, nke ahụ bụkwa ihe niile. N'ezie, ị ga-etinyekwu oge n'ịmepụta njikọ yana. Otú ọ dị, ị ga-ejide n'aka na njikọ ndị ahụ ga-enye gị nsonaazụ na-adịte aka.
E nwere ụzọ ụfọdụ ị ga-esi nweta akara azụ azụ dị mma:
Iji nweta backlinks dị mkpa, naanị ị nwere ike itinye aha na ozi gị na elu-ọma, ndekọ ahaziri ụmụ mmadụ. O nwere ike ịbụ na ị ga-akwụ ụgwọ ụfọdụ n'ime akwụkwọ ndekọ ndị a. Otú ọ dị, tupu i dozie maka ọrụ ụlọ ọrụ ọ bụla, ọ dị gị mkpa ijide n'aka na ọ bụghị ebe nrụọrụ weebụ spammy.
Usoro ọrụ ụlọ ọzọ bara uru bụ ịghọ blogger ọbịa. Na-arụkọ ọrụ na niche metụtara adreesị weebụ ma bipụtara ebe ahụ ụfọdụ na-akpali mmasị na posts na inbound njikọ na-ezo aka gị na saịtị.